Izindaba - Ukufakwa kweHydraulic Kwezicelo Zekhemikhali
Ama-Hose Hose Barbs
Ukufakwa kwe-Bulkhead JIC
Female JIC Swivels
I-JIC Split Flanges
Ukufakwa Kwepayipi Lowesilisa
I-NPSM Female Pipe Swivels
I-O-ring Boss Fittings
I-O-ring Face Seal Fittings
I-OFS Split Flanges
R4 Suction Hose Barbs
Hlukanisa ama-Flange Halves & Kits
Ukufakwa kweHydraulic Hose
43 Series Hose Ukufakwa
55 Series Hose Ukufakwa
56 Series Hose Ukufakwa
71 Series Hose Ukufakwa
73 Series Hose Ukufakwa
78 Series Hose Ukufakwa
91 Series Hose Ukufakwa
Khipha Ngokushesha ama-Couplings
Uchungechunge lwe-ISO 7241A
I-ISO 16028 Flat
Uchungechunge lwe-ISO 7241B
Cutting Ring Connection
Ukufakwa kweHydraulic Kwezicelo Zamakhemikhali
I-Chemical Processing Performance Advantage
Njengoba izindawo zokukhiqiza amakhemikhali zisebenza ubusuku nemini, izindawo ezingaphezulu zemishini zihlala zithintana nezinto ezimanzi, ze-caustic, abrasive, kanye ne-asidi. Ngezinqubo ezithile, kufanele zimelane namazinga okushisa ashisayo noma abandayo futhi kube lula ukuzihlanza.
Ukufakwa kwepayipi lensimbi engagqwali kwezicelo zemboni yamakhemikhali kunikeza izinzuzo eziningi. Lo mndeni wama-alloys asekelwe ku-iron uqinile, awukwazi ukugqwala, futhi uhlanzekile. Izici eziqondile zokusebenza ziyahlukahluka ngokwebanga, kodwa izici ezivamile zihlanganisa:
• Ukubukeka kobuhle
• Ihlala isikhathi eside
• Imelana nokushisa
• Imelana nomlilo
• Okungewona uzibuthe, emabangeni athile
• Iyasebenziseka kabusha
• Imelana nomthelela
Insimbi engagqwali inokuqukethwe okuphezulu kwe-chromium, ekhiqiza ifilimu ye-oxide engabonakali futhi eziphilisayo ngaphandle kwento ethile. Indawo engenazimbobo ivimbela ukungena komswakama, inciphisa ukugqwala kwemifantu kanye nezinkinga zokubhoboza. Ukusetshenziswa kwe-antibacterial cleaner elula kususa amagciwane ayingozi nama-virus.
Izixazululo Ezisebenzayo Zokucutshungulwa Kwekhemikhali
I-Hainar Hydraulics ikhiqiza izifakelo zensimbi engagqwali ezijwayelekile nezingokwezifiso zokusetshenziswa kwamakhemikhali. Kusukela ekuvikeleni ukugqwala kuya ekulondolozeni inqubo yokuhlanzeka kwemidiya, iqoqo lethu lemikhiqizo linganqoba noma iyiphi inselele.
• I-Crimp Fittings
• Ukufakwa Kabusha
• I-Hose Barb Fittings, noma Okokufaka kwe-Push-On
• Ukufakwa kwezinsimbi
• Ukufakwa kwe-Metric DIN
• Amashubhu ashiselwe
• Ukwenziwa Ngokwezifiso
Ukufakwa okujwayelekile nama-adaptha akuhlali kuyisinqumo esingcono kakhulu salo lonke uhlelo lokusebenza. Thola isisombululo sezidingo zakho zokulawula uketshezi ngosizo lwe-Hainar Hydraulics.
Umnyango wethu wokwakha wangaphakathi wakhiwe ngabasebenzi abanolwazi kanye nemishini ethuthukisiwe yomshini nokushisela. Bangakwazi ukwenza imikhiqizo yangokwezifiso ehambisana nezidingo ezithile.
Ukuhlangabezana Nezidingo Zokulawula Uketshezi Lwemboni Yamakhemikhali
Ukufakwa kwekhwalithi ephansi nama-adaptha anqanda amandla okucubungula amakhemikhali. Ukuxhunywa ngomshini okungalungile kunezindlela ezivuzayo, futhi izindonga ezingahambelani zingaqhuma ngaphansi kwengcindezi. Yingakho i-Hainar Hydraulics yethu. ibeka ikhwalithi kuqala. Imishini yethu ye-CNC isike imicu ngokunemba. Izinombolo zezingxenye, izinombolo ze-serial, izinombolo zeqoqo, amakhodi okukopela, nanoma iyiphi enye indlela yokulandeleka ingafakwa nge-laser emikhiqizweni.
Zonke izinto esizenzayo zihlangabezana ne-ISO 9001:2015 izindinganiso zokuqinisekisa ikhwalithi zokufakwa, ukukhiqizwa, kanye nenkonzo. Izinto ezibonakalayo zitholwa kubahlinzeki abathembekile, futhi ukuthobelana kuqinisekiswa lapho ufika. Izisebenzi ezilawula ikhwalithi zisebenzisa izisetshenziswa zokuhlola ezinembayo ukuze ziqinisekise ukuthi yonke imikhiqizo idlula izindinganiso zomkhakha ezisebenzayo noma ukucaciswa kwamakhasimende. Wonke ama-oda acwaningwa ukuze anembile ngaphambi kokuthunyelwa.
Izinto zethu zokufakwa nama-adaptha zilungele noma yiluphi uhlelo lokucubungula amakhemikhali. Izibonelo zifaka:
• Ukwelashwa Ngoketshezi
• Ukudlulisa Ukushisa
• Ukusabalalisa umkhiqizo
• Ukupholisa okuhwamukayo
• Ukuhwamuka kanye Nokomisa
• Ukukhipha isisu
• Ukwehlukana Kwenqwaba
• Ukuhlukaniswa Kwemishini
Okubalulekile esigxile kukho ukufakwa ngaphansi kwamanzi okusetshenziswa kwamakhemikhali, kodwa singakwazi ukwakha futhi sithumele cishe noma iyiphi idivayisi yokulawula uketshezi. I-inventory ebanzi yensimbi engagqwali iqinisekisa ukuthi sinengxenye oyidingayo esitokweni futhi isilungele ukuthunyelwa.
Isikhathi sokuthumela: May-24-2021
Isakhiwo, No.39 Longtanshan Road, Ningbo China 315800
© Copyright - 2010-2022 : Wonke Amalungelo Agodliwe.